Arakan Eagle: 2010
"Birds of Passage";Migration of South Indian Labour
By: Adapa Satyanarayana
Posted by Eagle info dash at 07:59 No comments:
ရခိုင်ပြည်သူတိရီးထားရယ်...အသျှင် ပညာစါရ...Bio Link
Posted by Eagle info dash at 04:13 No comments:
နအဖ က ရခိုင်ပြည်သူတှေကို....Genocide ပြုလုတ်နေ...
Posted by Eagle info dash at 04:08 No comments:
Others including Animism and Chinese folk religion 2%
Posted by Eagle info dash at 11:00 No comments:
ethnic group or race
Other groups 4.5%
Posted by Eagle info dash at 10:56 No comments:
Arakanese Culture Dance and Food afair in London.
Posted by Eagle info dash at 13:06 No comments:
မလေးရှားရောက် ရခိုင်များ UNHCR ကို ဆန္ဒပြ ( Irrawaddy)
ဘစောတင် Monday, June 07, 2010
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) သည် မြန်မာ တိုင်းရင်းသားချင်း တူသော်လည်း ရခိုင်နှင့် ဗမာများကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ် မပြုသောကြောင့် ရခိုင်ဒုက္ခသည်များက ယနေ့နံနက် ၈ နာရီ မှစ၍ ဆန္ဒ ပြခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မလေးရှား UNHCR သည် ချင်း၊ မွန်၊ ကချင်စသော တခြား မြန်မာတိုင်းရင်းသားများကို ဒုက္ခသည်များ အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုသော်လည်း ရခိုင်နှင့် ဗမာလူမျိုး ၂ မျိုးကို ချန်လှပ်ထားသည့်အပေါ် မကျေနပ်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒပြရကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ ဆန္ဒပြရာတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်သူ ကိုညီချေက “တခြားလူမျိုးတွေကို လူဦးရေ ထောင်နဲ့၊ သောင်းနဲ့ ချီပြီး ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေမယ့်လည်း ကျနော်တို့ကျတော့ ဘာလို့ ခွဲခြားဆက်ဆံရတာလဲ။ ဒါကို သိချင်လို့ ဒီနေ့ ဆန္ဒသွားပြကြတာ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ရခိုင်နှင့် ဗမာများကို မလေးရှား UNHCR က လျစ်လျူရှုထားသည်မှာ နှစ်အတန်ကြာပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်ထားခွင့်ပင် မပေးကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် မလေးရှား ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းများအတွင်းရှိ အဖမ်းဆီးခံများ၊ ထောင်ကျနေသူများကိုပင် အကူအညီ မပေးတော့ကြောင်း ဆန္ဒပြသူ ကိုအာနိုးကပြောသည်။
“မလေးရှားမှာ ဖမ်းလို့ ထောင်တွေ၊ Camp တွေမှာ ထိန်းသိမ်းခံရပြီဆိုရင် UN က လာပြီး အကူအညီ ပေးလေ့ရှိတယ်။ တခြား တိုင်းရင်းသားတွေဆိုရင် UN ၀င်ခွင့်ရအောင် လုပ်ပေးကြတယ်။ ကျနော်တို့ကျတော့ လာတောင်မတွေ့တာများတယ်။ ကျနော်တို့လည်း တခြား တိုင်းရင်းသားတွေလိုပဲ စစ်အစိုးရရဲ့ မတရား ဖိနှိပ်မှုကို ခံနေရတဲ့သူတွေပဲ။ ဒီလို ခွဲခြားခံရတာကတော့ မကောင်းဘူးထင်လို့ ဒီနေ့ ဆန္ဒ၀င်ပြတာ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
မလေးရှားရှိ UNHCR သည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများအကြားတွင် လူမျိုးရေး ခွဲခြားရုံမက ဘာသာရေးအရပါ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်နေသည်ဟု ဗမာဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးအသင်း (BRO) မှ ဥက္ကဌ ဦးမောင်လှက ပြောသည်။
“ကျနော် သိထားသလောက် ပြောရရင် သူတို့က တိုင်းရင်းသားတွေကို ဦးစားပေးတယ် ဆိုပေမယ့် တကယ်က သူတို့စိတ်ထဲက မကြိုက်တဲ့ လူကို မပေးဘူးဗျ။ မှန်တာပြောတဲ့ လူကိုဆို မပေးဘူး။ နောက်တခုက ဘာသာရေး ခွဲခြားမှုရှိတယ်။ UNHCR အရာရှိ ကိုယ်တိုင် ပါးစပ်ကထုတ်ပြောတာ။ Camp ထဲမှာရော၊ ထောင်ထဲမှာပါ ပြောတယ်။ မင်းတို့ က ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ၊ မင်းတို့က့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လို့ရတယ်၊ မင်းတို့ကို မပေးဘူးလို့ကိုပြောတာ” ဟုသူက ဆိုသည်။
သို့သော် တချို့သော ဗမာနှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများသည် တခြားတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ အစည်းများသို့ ငွေပေးဝင်ရောက်ကာ UNHCR သို့ လျှောက်ထားပါက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်သော်လည်း လက်ခံသည်ကို တွေ့ ရှိရကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
“မလေးရှား UN က အခုနောက်ပိုင်း ရခိုင်ကို မပေးတာက ရခိုင်ဟာ ဗမာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ချင်းလည်းတူတယ်၊ ရုပ်ရည် လက္ခဏာလည်း သိပ်ကွာဟမှုမရှိဘူးလို့ ပြောတယ်” ဟု ကွာလာလမ်ပူ အခြေစိုက် ရခိုင်ဒုက္ခသည် မဟာမိတ်များ အဖွဲ့ချုပ် AAR မှ ဒုဥက္ကဌ ကိုခိုင်ထက်နိုင်က ပြောသည်။
ယင်းသို့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေခြင်းကို မီးမောင်းထိုးပြသည့် အနေဖြင့် ဗမာဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးအသင်း BRO က “ဒုက္ခသည်အခွင့်အရေး လက်စွဲ” အမည်ရှိ စာအုပ်တအုပ်ကို မကြာမီ ဖြန့်ဝေသွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စာအုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရေးသားပြုစုသူ ဘလော့ဂါ ကိုအလင်းဆက်က “လူတွေက ဒုက္ခသည်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ ဘယ်လိုလူတွေဟာ ဒုက္ခသည် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသလဲ ဆိုတာတောင် ကျကျနန နားမလည်ကြဘူး။ တကယ်လို့ ဒီစာအုပ်ကို လူတွေက ဖတ်ကြမယ်ဆိုရင် UNHCR က ခွဲခြား ဆက်ဆံရင်တောင် ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်တိုင် တောင်းတတ်လာမယ်။ ဒီစာအုပ်ရဲ့မူရင်းကလည်း UNHCR ကိုယ်တိုင် တကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ချိထားတဲ့ Protecting Refugee Question and Answer စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာမှ မလေးမှာ ခွဲခြားမှုရှိတာတချို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာပါ´ ဟု ရှင်းပြသည်။
ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဆန္ဒပြရာသို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ အပါအ၀င် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၆၀ ၀န်းကျင်ခန့်တို့ လာရောက် ဆန္ဒပြခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ရခိုင်ဒုက္ခသည် မဟာမိတ်များ အဖွဲ့ ချုပ် ဒုဥက္ကဌ ကိုခိုင်ထက်နိုင်၏ ပြောပြချက်အရ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် UNHCR ရရှိပြီးသား ဒုက္ခသည် ၁၀၀၀ ကျော်ခန့်ရှိပြီး လျှောက်ထားလိုသူ ၂၀၀၀၀ ခန့်ရှိကြောင်းသိရသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား သိန်းနှင့်ချီ၍ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခိုလှုံနေထိုင်ကာ အလုပ်လုပ်လျှက်ရှိသည်။
Posted by Eagle info dash at 07:09 No comments:
လူမျိုးရေး မခွဲခြားရန် ဒုက္ခသည်ရုံးကို ဆန္ဒပြ (by Mizzima)
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မလေးရှားရောက် ရခိုင်လူမျိုး ဦးရေ ၅ဝ ကျော်သည် လူမျိုးရေး ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း မပြုဘဲ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန်အတွက် မြို့တော်ကွာလာလမ်ပူရှိ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR သို့ ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် သွားရောက်ဆန္ဒပြခဲ့သည်။
မလေးရှားရောက် ရခိုင်ဒုက္ခသည်များအား UNHCR က အသိအမှတ်ပြု ကူညီစောင့်ရှောက်ရန်၊ မလေးရှား အကျဉ်းထောင်နှင့် ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းများရှိ အထိန်းသိမ်းခံ ရခိုင်များအား UNHCR က ကူညီဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် UNHCR ရုံးတွင် ရခိုင်ဘာသာပြန် ထားရှိရန်ဟူသည့် အချက် ၃ ချက်ကို ဆန္ဒပြသူများက တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
“ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုတယ်။ UN က ခွဲခြားဆက်ဆံလို့ ဆန္ဒသွားပြကြတာ။ ပြီးတော့ ထောင်တွေနဲ့ camp တွေမှာဆိုလည်း UN က မကြည့်ပေးဘူးဗျ။ လာကြည့်ရင် ရခိုင်ဆိုရင် ချန်ထားခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့ လူမျိုးဆိုရင် pass ပေးလိုက်တယ်။ နောက်တချက်က ကျနော်တို့ ရခိုင်လူမျိုး ဘာသာပြန် လျှောက်တော့လည်း မခန့်ဘူးဗျာ။ အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့ ကိုယ့်စကားနဲ့ ဘာသာမပြန်ရတဲ့အတွက် လိုရင်းမရောက်တာတွေ ရှိတယ်” ဟု ဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူ တဦးဖြစ်သည့် ကိုမင်းမင်းထွန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
တောင်းဆိုချက် ၃ ချက် ရေးသားထားသည့် ပေးစာကို UNHCR ရုံး တာဝန်ရှိသူတဦးက လက်ခံရယူကာ ၎င်းတို့ရုံးအနေဖြင့် စဉ်းစားပေးမည်ဟု ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်မှ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း UNHCR က ရခိုင်များကိုပါ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ရာမှ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားခွင့်ပင် မရတော့ကြောင်းနှင့် မလေးရှားတွင် UNHCR ၏ စောင့်ရှောက်မှုကို ခံယူလိုသူ ရခိုင်လူမျိုး ၁ သောင်းကျော်ရှိကြောင်း ဆန္ဒပြသူများထံမှ သိရှိရသည်။
မလေးရှားတွင် ရခိုင် ဦးရေ ၁၅ဝဝဝ ခန့်ရှိရာ ၁၇ဝဝ ခန့်သာ UNHCR အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရရှိထားပြီး၊ ၅ဝဝ ခန့်မှာ ယာယီလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားကြောင်းနှင့် ၂၅ဝ ခန့်မှာ တတိယနိုင်ငံသို့ အခြေချခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ရခိုင် ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီထံမှ သိရသည်။ ထို့အပြင် တနိုင်ငံလုံးရှိ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း ၁၁ ခုတွင် အထိန်းသိမ်းခံနေရသူ ရခိုင်လူမျိုး ဦးရေ ၃ဝဝ ကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (မလေးရှား) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုထွန်းဝင်းညွန့်က “ကျနော်တို့ ဗမာရယ်၊ ရခိုင်တွေရယ်ကို UN က ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်။ မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုတယ်။ ကျနော်တို့ကျတော့ လျှောက်လွှာတောင် တင်ခွင့်မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ ကျနော်တို့ကို အသိအမှတ်မပြုတာလဲလို့ UN ကို မေးတော့ မင်းတို့က ဗမာလူမျိုးဖြစ်လို့ passport (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်) ရှိတယ်၊ ပြန်လို့ရတယ် ဆိုတာလောက်ပဲ ယေဘုယျဆန်ဆန် ဖြေတယ်’’ ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ချင်းဒုက္ခသည်များ ကော်မတီ (မလေးရှား) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တဦးကလည်း “မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားတွေကို အသိအမှတ်ပြုကဒ် ထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ ဗမာနဲ့ ရခိုင်တွေ မပါတော့တာ သတိထားမိတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲတော့ ကျနော် မသိဘူး” ဟု ပြောသည်။
မလေးရှား UNHCR ရုံးသို့ မဇ္ဈိမက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီး Yante Ismail က ၎င်းအနေဖြင့် အသေးစိတ် အခြေအနေကို မသိရှိသဖြင့် ပြောဆိုရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ယခုနှစ် ဧပြီလကုန်အထိ မလေးရှား UNHCR သို့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်ထားသူနှင့် အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးသူ စုစုပေါင်း ၈၇၇ဝဝ ဦးရေ ရှိသည့်အနက် မြန်မာနိုင်ငံသားမှာ ၈၁၂ဝဝ ရှိသည့်အထဲတွင် ချင်း (၃၉၁ဝဝ)၊ ရိုဟင်ဂျာ (၁၈၈ဝဝ)၊ မြန်မာမူဆလင် (၅၉ဝဝ)၊ မွန် (၃၈ဝဝ)၊ ကချင် (၃၆ဝဝ) နှင့် အခြားလူနည်းစုများဖြစ်ကြောင်း UNHCR (မလေးရှား) ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကျန်အရေအတွက်များမှာ သီရိလင်္ကာ၊ ဆိုမားလီး၊ အီရတ်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်မှ ဖြစ်သည်။ ဒုက္ခသည်နှင့် လျှောက်ထားဆဲ အားလုံး၏ ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျိုးသားများဖြစ်ပြီး၊ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ အသက် ၁၈ နှစ် အရေအတွက်မှာ ၁၉ဝဝဝ ပင် ရှိသည်။
မလေးရှားသည် ၁၉၅၁ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ၏ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ သဘောတူစာချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်း မရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် UNHCR ဒုက္ခသည်လက်မှတ် ရရှိထားသူများ၊ ခိုလှုံခွင့် လျှောက်ထားသူများနှင့် နိုင်ငံမဲ့များအား တရားမဝင် ကူးပြောင်းလာသူများအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ဖမ်းဆီးထောင်ချလေ့ရှိသည်။ တရားမဝင် အလုပ်သမားများကိုလည်း ငွေဒဏ်နှင့် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်လေ့ရှိသည်။
ကွာလာလမ်ပူတွင် တရားမဝင် အလုပ်သမားအဖြစ် နေထိုင်သူ မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးက “ကျနော်တို့က ရဲဖမ်းမခံရအောင် သူများ passport ကို ကပ်ခွာလုပ်ပြီး နေတယ်လေ။ UN ကလည်း အသိအမှတ်မပြု၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကဒ်နဲ့လည်း မရဘူး။ ဖမ်းတာပဲ” ဟု ပြောသည်။
လယ်ယာမြေသိမ်းပိုက်ခြင်း၊ လုပ်အားပေးခိုင်းစေခြင်း၊ စစ်မက်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် စီးပွားရေးကျပ်တည်းခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား သိန်းပေါင်းများစွာသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသာမက မလေးရှားသို့ပါ သွားရောက်ကာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by Eagle info dash at 06:08 No comments:
( အဏ္ဏ၀ါစစ်သည်ရဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်ပရောက် ရခိုင်ကျောင်းသား တစ်ဦးရဲ့ တင်ပြချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို ဘယ်သူတွေ ပွဲထုတ်လာခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင် စရာ ကောင်းတဲ့ အချက်အလက်များ ပါတာမို့
ဝေမျှပေး လိုက်ပါတယ်။ )
အဏ္ဏ၀ါ စစ်သည်ဆိုသူက ရိုဟင်ဂျာ အကြောင်း ရေးသွားပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ မသိတဲ့
ဖဆပလခေတ်က အကြောင်းတွေ ပါလာလို့ ဗဟုသုတရပါတယ်။ ဖဆပလက အာဏာတစ်ခုထဲ အတွက် ရေရှည်
အန္တရာယ်ကို မကြည့်ဘဲ ကုလားအမတ်တွေ မွေးခဲ့တယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကုလားအမတ်တွေက
စသုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ထဲမှာ တစ်ခုတော့ ထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ်။ တည်မြဲ၊ သန့်ရှင်း ကွဲပြီးနောက် အိမ်စောင့်အစိုးရ
တက်တယ်။ အိမ်စောင့်အစိုးရက ၁၉၆၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ် ဆိုတော့ ၁၉၅၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ဦးနု
ရခိုင်ကို မဲဆွယ်ဖို့ လာတယ်။ မောင်တော မြို့နယ်မှာ စည်းရုံးရေး လုပ်တဲ့အခါ ဦးနုက သန့်ရှင်းသာ အနိုင်ရရင် ရိုဟင်ဂျာ
လူမျိုးလို့ သတ်မှတ်ပေးမယ်။ မြန်မာ့ အသံက တိုင်းရင်းသား အစီအစဉ်တွေမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာနဲ့ အသံလွှင့်
ပေးမယ်လို့ ကတိပေးသွားတယ်။ သူနိုင်တော့ မြန်မာ့အသံကနေ ရိုဟင်ဂျာ အစီအစဉ်ဆိုပြီး လေးလလောက်
လွှင့်လိုက်သေးတယ် ။ နောက်တော်လှန်ရေး ကောင်စီ တက်တော့မှ အဲဒီအသံလွှင့် အစီအစဉ် ရပ်သွား တယ်။
နောက်ပြီး ဦးနုကို ကုလားတွေက မေယုပြည်နယ် ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပေးဖို့ တောင်းတယ်။ ဦးနု က ပြည်နယ်တော့
မပေးဘူး၊ သို့သော် သီးခြားဒေသ တစ်ခု သတ်မှတ် ပေးမယ်လို့ ကတိပေး သွားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဦးနုရဲ့ ပထစပါတီ
အနိုင်ရတဲ့အခါ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ၊ ရသေ့တောင် မြို့နယ်တွေကို မေယုနယ်ခြား ခရိုင်ဆိုပြီး သီးခြားခရိုင်
တစ်ခုဖွဲ့တယ်။ အဲဒီခရိုင် ထဲက ကုလားတွေကို မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီလို လုပ်ပေးတဲ့ အတွက် ၁၉၇၈ ခုနှစ်
နဂါးမင်း စစ်ဆင်ရေးနဲ့ ဟင်္သာစစ်ဆင်ရေးလုပ်တဲ့ အခါ အဲဒီကုလားတွေဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ခိုးဝင်လာတဲ့
ကုလားတွေမှန်း သိသိကြီးနဲ့ မှတ်ပုံတင် ကိုင်ထားတော့ ပြန်လက်ခံခဲ့ရတယ်။
တကယ် ဥပဒေအရက ၁၈၈၅ မတိုင်မီကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ လူများကိုပဲ နိုင်ငံသား
အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေး ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာ
ကူလီကူမာကျတဲ့ ကုလားများမှာ တာဝန်ရှိသလို အမတ်နေရာ သုံးလေးနေရာ ရဖို့အတွက် အာဏာ ရူးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး
သမားတွေမှာလဲ တာဝန်ရှိ တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်တယ်။
ဒါက အတိတ်တုံးက အဖြစ် ။ အခု ခေတ်မှာလဲ ဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာပေါ် ရောက်လာအောင်
လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်မြန်မာ နိုင်ငံရေးသမား၊ ဒီမိုကရေစီ သမားဆိုသူတွေ ပါနေပြန် တယ်။ ပထမဆုံး ပါလာတဲ့အဖွဲ့က
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ပါခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားအဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး
( မကဒတ) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ပြောတိုင်း အလွန် ၀မ်းနည်းပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က မကဒတ ဗဟိုကော်မတီ
အစည်းအဝေးမှာ ကေအင်ယူက ဖွဲ့ပေးထားတဲ့ အစ္စလမ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦးနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ
ကိုယ်စားလှယ် တစ်ချို့က ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို ထောက်ခံဖို့ ၊ အဲဒီလို ထောက်ခံရင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းက
ထောက်ပံ့ငွေတွေ ရအောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က မကဒတမှာ ရှိတဲ့ ရခိုင်
ကျောင်းသားများက ဒီအစီအစဉ်ကို ကန့်ကွက်ခဲ့ ပါသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်က တွေးတာက န၀တကို
တိုက်ဖို့အတွက် အားလိုတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံတကာ အားယူဖို့ အတွက် ရနိုင်တဲ့ လက်နက် အားလုံးကို သုံးရမယ်လို့
ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ မကဒတ ( ဗဟို) ရဲ့ သုတေသနဌာနက စာမျက်နှာ ၄၉
မျက်နှာပါစာ ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတမ်း တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ အဲဒီစာတမ်းမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်
မြန်မာအစိုးရက ပြုလုပ်တယ် ဆိုတဲ့ ဖိနှိပ်မှုများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက
လူမျိုးစုတစ်ခု အဖြစ်နဲ့ ပုံဖော်ခဲ့ ပါတယ်။
အဲဒီစာတမ်းဟာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်ကုန်မှာ န၀တက ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ မှတ်ပုံတင် စစ်ဆေးပြီး တရားမ၀င်
ခိုးဝင်လာသူတွေကို ဖော်ထုတ်တဲ့ စစ်ဆင်ရေးကြောင့် ကုလားတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက်ကို ပြန်ထွက်ပြေးတဲ့ အချိန်နဲ့
အချိန်ကိုက် ပေါ်ထွက် လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစာတမ်းလိုပဲ INGO တွေဆီကလည်း ရိုဟင်ဂျာများ အပေါ်
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဆိုတဲ့ စာတမ်းတွေ ဆက်တိုက် ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီစာတမ်း အားလုံးမှာ
ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအရ ဖိနှိပ်ခံ လူမျိုးစုအဖြစ်နဲ့ ပုံဖော်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအတွက်လည်း မလေးရှားနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဘာသာရေး အခြေခံပါတီတွေ၊ ဘာသာရေး ကျောင်းတွေက ဒေါ်လာ
သန်းနဲ့ချီ သုံးခဲ့ပါတယ်။ မကဒတ ကိုလည်း ဒေါ်လာ တစ်သန်းကျော် ပေးခဲ့ပြီး လက်နက် အချို့လဲ ထောက်ပံ့
ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီအထိ
ရောက်သွားပြီး ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစုဆိုတာ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာမှာ အတည်လို ဖြစ်သွားပါတယ်။ နအဖကို တိုက်ဖို့ သုံးတဲ့
လက်နက်ကြောင့် နအဖအစိုးရ ပြုတ်ကျ မသွားပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ထဲမှာတော့ ဘယ်တုံးကမှ မရှိခဲ့တဲ့
မုတ်ဆိတ်ဖားနဲ့ ကုလားလူမျိုးစု တစ်စု အပိုင်ရလိုက်ပါပဲ။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဒီလို ပုံဖော်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဘင်္ဂါလီ
ကုလားများဟာ သူများနိုင်ငံကို ခိုးဝင်တဲ့လူ အဖြစ်ကနေ ဖိနှိပ်လို့ ထွက်ပြေးလာ ရပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒုက္ခသည်ဘ၀ကို
ရောက်သွားပါ တော့တယ်။ ဒီခေါင်းစဉ် အောက်ကနေ ထိုင်း၊ မလေးရှားဘက်ကို ထွက်ကြ တော့တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ
ဒီလိုခိုးဝင် နေတာတွေ ရှိတုံးဖြစ်သလို၊ ခိုးဝင် လာသူတွေကို ဖော်ထုတ် အရေးယူဖို့ လုပ်တိုင်း ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတွေကို
ဖိနှိပ်ပါတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာမှာ အသံကုန် အော်ခွင့် လိုင်စင် ရသွားတာပါပဲ။
မကဒတ နောက်ပိုင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို ရှေ့တန်းတင် လာတာက ဦးဟန်ယောင်ဝေပါပဲ။ ဦးဟန်ယောင်ဝေကလဲ
မကဒတရဲ့ စဉ်းစားပေါက် အတိုင်းပဲ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ငွေတွင်းကြီးလို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ENC အနေနဲ့ရော၊
ဥရောပမှာ သူလှုပ်ရှားနေတဲ့ အသိုင်းအ၀န်း ထဲမှာရော ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို Issue အဖြစ်နဲ့ တင်လာပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်တာကို ပြည်ပရောက် ရခိုင်နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေက ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးဟန်ယောင်ဝေဟာ
ဦးခင်မောင်လို ရခိုင်ကိုယ်ကျိုးရှာ နိုင်ငံရေး သမားကိုတော့ နံမည်ခံ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပေးပြီး ရိုဟင်ဂျာအရေးကို
ရခိုင်လူမျိုးတွေက ထောက်ခံတဲ့ အသွင်ကိုတော့ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ တရားဝင် နေထိုင်ခွင့် ရနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ကုလားများရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ
ဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် စတာတွေကို လက်ခံပါတယ်။ အဖိနှိပ်ခံ မြန်မာပြည်သူ
တွေလိုပဲ သူတို့အနေနဲ့ ဒီအခွင့်အရေးတွေကို
ရဖို့အတွက် စည်းရုံး လှုပ်ရှားတာကို ကျွန်တော်တို့ ထောက်ခံပါတယ်။ သို့သော် ဒီအခွင့်အရေးကို အကြောင်းပြပြီး
ဘင်္ဂါလီ ကုလားတွေကို တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအဖြစ် ဖန်တီးတာကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီအခွင့်အရေးကို အကြောင်းပြပြီး
နောက်ထပ် တရားမ၀င် ခိုးဝင်မှုတွေ ဖြစ်လာအောင် အားပေးတာ။ ခိုးဝင်လာခဲ့သူတွေကို မြန်မာ နိုင်ငံသား အဖြစ်
ရောက်အောင် လုပ်တာတွေ ကိုတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
ဒီလိုဖြစ်အောင် အားပေးနေတဲ့ ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေး သမားများကိုလည်း သူတို့ အနေနဲ့
လူ့အခွင့်အရေးကို မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီး မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဘယ်တုံးကမှ မရှိတဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုး ပေါ်လာအောင် လိမ်ညာ
လှည့်ပတ်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီကုလားများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုများကို ထောက်ခံ နေခြင်းဟာလဲ ရခိုင်လူမျိုးများကို စော်ကားနေတာ
ဖြစ်ပြီး ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဖော်ဆောင်ဖို့ အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား ညီညွတ်မှုကို ပျက်စီးအောင်
လုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိပေးလိုပါတယ်။
၆၀ တုံးက ဦးနုအာဏာရူးပြီး ကတိတွေ ပေးခဲ့တာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံးက အတည် ဖြစ်ခဲ့ရပြီးပြီ။
အခုလဲ နအဖကို ဆော်ဖို့ အတွက် ရိုဟင်ဂျာကို သုံးဖို့ ပြန်လုပ်လာပြန်ပြီ။ ဒါဟာ ဖရန်ကင်စတိန်းလို ဖုတ်ကောင်ကြီးကို
အသက်သွင်း ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ နအဖ နဲ့သာ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ အမျိုးသားရေး၊
ပြည်ထောင်စု အရေးဖြစ်တယ် ဆိုတာကို မမေ့ဖို့ လိုပါ တယ်။
Posted by Eagle info dash at 05:41 No comments:
Arakanese Refugees Demostrate at UNHCR in Malasia.
Kuala Lumpur: Over 70 Arakanese refugees stagedademonstration on Monday in front of the UNHCR office in Malaysia's capital Kuala Lumpur, demanding immediate attention to their plight as unregistered refugees.
Saw Than, the spokesperson for the demonstration, said that they were facing arrest by authorities as well asalack of food and shelter due to their neglect by the UNHCR in Malaysia.
"More than 300 Arakanese refugees have been held in the detention camps for more thanayear, and many others, including us who had applied for status since 2008, are still being ignored by the UNHCR. We are now facing arrest by the Malaysian authorities andalack of food, shelter, and medical assistance," he told Narinjara over telephone.
He also said, "We feel we are also being discriminated against by the UNHCR here because the UNHCR has recognized so many other ethnic people from Burma as refugees since 2008, but notasingle Arakanese has been among those [refugee] registrations."
Narinjara attempted to contact the UNHCR office in Malaysia via telephone but was unable to reach anyone there.
Saw Than added that the demonstration had lasted for nearly one and half hours and was peacefully concluded when Mr. Mikael, the UNHCR Malaysia Registration Officer, promised to consider their demands as soon as possible. The list of protesters present was also taken by the UNHCR and the local police.
According to the Arakan Refugee Relief Committee based in Kuala Lumpur, over 10,000 Arakanese refugees are currently sheltering in Malaysia after fleeing persecution at the hands of the Burmese military regime. However, very few of them have been registered as refugees by the UNHCR office in Malaysia.
Posted by Eagle info dash at 04:56 No comments:
Pretty of Arakanese Girl
Dancing at Rangoon (Live)
Posted by Eagle info dash at 12:29 No comments:
Princess of Arakanese
Photos from Arakanese Meeting Point (KWKhaing)
Posted by Eagle info dash at 11:41 No comments:
Posted by Eagle info dash at 11:33 No comments:
Posted by Eagle info dash at 11:29 No comments:
Arakanese girls's dancing.
Posted by Eagle info dash at 08:58 No comments:
"Birds of Passage";Migration of South Indian Labou...
ရခိုင်ပြည်သူတိရီးထားရယ်...အသျှင် ပညာစါရ...Bio Link...
မလေးရှားရောက် ရခိုင်များ UNHCR ကို ဆန္ဒပြ ( Irrawad...
လူမျိုးရေး မခွဲခြားရန် ဒုက္ခသည်ရုံးကို ဆန္ဒပြ (by Mi...
Arakanese Refugees Demostrate at UNHCR in Malasia....